Fantany ny zavatra ilaintsika raha tsy mbola mangataka aza aza isika
"Fantatry ny Rainareo izay tokony ho anareo, raha tsy mbola mangataka aminy aza hianareo" - Mat. 6:8
Raha ny voninkazo tsotra, izay malazo ao anatin'ny iray andro aza, no tafin'Andriamanitra ny lokony kanto sy maro karazana, moa tsy hanoatra lavitra noho izany ny hikarakarany ny olombelona izay noforoniny tahaka ny endriny? (...) Raha tia sy mankato an'Andriamanitra ny olona, ka manatontosa ny adidiny, dia homen'Andriamanitra azy izay rehetra iriny (...) Tsy misy olona mahay manampy iray hakiho ny halavany, na toy inona na toy inona fiezahany amin'izany. Dia toy izany koa, tsy ilaintsika ny ho be fanahiana ny amin'ny ampitso sy izay ilaina amin'izany. Tanteraho ny adidinao, dia matokia an'Andriamanitra; satria fantany izay ilainao (...) Manoatra noho ny fiahian'ny reny ny zanany my ny fiahiany antsika amim-pitiavana (...) Sakaiza ao anatin'ny fahaverezan-kevitra sy ny fahoriana Andriamanitra, mpiaro ao anatin'ny loza, ary mpitahiry ao anatin'ireo loza an'arivony izay tsy hitantsika akory. — RH, 18 Septambra 1888.
Mitoetra ao amin'ny isan-tokantrano Andriamanitra; mihaino ny teny rehetra izay tononina Izy, ary mandre ny vavaka rehetra asandratra, miombom-po amin'ny alahelo sy ny fahadisoam-panantenan'ny fanahy tsirairay, ary mijery ny fomba fitondrana ny ray, ny reny, ny anabavy, ny namana ary ny mpifanolo-bodirindrina. Manome izay ilaintsika Izy, ary arotsany tsy miato amintsika ny fitiavany sy ny famindrampony mba hanomezany fahafaham-po antsika amin'izay ilaintsika (...) Azontsika atao ny mitsahatra amim-piadanana ao amin'ny fikarakarany. — TMB, 160
Manampy ny reraka Andriamanitra, ary mampatanjaka ireo izay tsy manana hery. Any amin'ny toerana izay be kokoa ny fisedrana sy ny tolona ary ny fahantrana, no ilan'ireo mpanompon'Andriamanitra fiarovana bebe kokoa. Ho an'ireo izay miasa any amin'ny vava-ady, dia izao no lazain'Andriamanitra: "Manohana ny tananao ankavanana Aho."
Mahatakatra sy mamaly ny zavatra ilaintsika manokana ny Tompo. Manohana ny tanantsika ankavanana Izy. Miara-mandeha amintsika eo anilantsika Izy, ary vonona ny hanome antsika izay ilaintsika. Akaiky indrindra izay manolo-tena hanompo Azy Izy. Fantany ny momba ny tsirairay. Endrey ny antoka ananantsika ny amin'ny fitiavan'i Kristy. — SDABC, 3:1153